Musiki D-Wave: "Real AI ichave yakangwara kupfuura vanhu uye nekunzwisisa mupfungwa": Martin Vrijland
Geordie Rose, muvambi wekambani yakavaka yekutanga makombiyuta, D-Wave, yatanga kambani itsva ichavaka 'Real AI'. Icho ndicho njere dzekugadzirira, asi kubva pachiyero icho hachikwanise kusiyaniswa neuchenjeri hwevanhu uye kunyange kuchipfuura. Muhurukuro iri pasi apa, iyo yaanotaurira kambani yacho, inotsanangura kutsvakurudza kwake 'demonologists software engineers', iyo yaanoita kuti kutamba paElon Musk kudane dhimoni rinotaura nezveAI. Muhurukuro yake anotsanangura izvo 'Real AI', iyo iyo inopfupikisa kuti kambani yake itsva Kindred ichaunza njere yepamusoro inopfuurira huchenjeri hwevanhu. Kutya kwe 'Terminator effect' yeAI anonyatsorega nekutaura kuti vanhu vanongoda AI kugadzirisa zvinetso zvakaoma zvingatora nguva yakareba kuti zvigadziriswe.
Super AI mabhoti achave akachenjera kupfuura munhu akachenjera uye achadzidza kunzwisisa nekuvandudza maitiro avo, izvo zvichaunza kukura kwekudzidzira kwehuchenjeri hwavo. Munhu akakurumbira haaoni chero njodzi, asi ndizvo chaizvo zvandakambonyevera pamusoro pezvikamu zvangu pamusoro transhumanism uye blockchain cryptocurrencies as the bitcoin. Muchikamu ichoku chokupedzisira chezvinyorwa ndakakurukura kugadzirwa kwe robot Sophia uye singularity network iyo ine chimiro cheAI chaicho. Kutaura zvazviri, ungati kuti saka nokuhama ndiye zvishoma kumanheru nokuti "Sophia AI" zvimwe vakakwanisa kuzadzisa zvinodiwa 'Real AI' hama. Zvisinei, isu tatanga kubva kubvuma kuti "American hope" Entrepreneurs zvose izvi (Geordie Rose, Peter Thiel, Eroni musk, etc.) asi vane nevakawanda 'madhimoni' zvakarongwa, ipapo tinogona kufungidzira kuti achawedzera mumwe. Muchidimbu, unogona chaizvoizvo tichivimba nokuhama pane imwe nzvimbo singulariteitsnetwerk kuchaita kushandisa zivo uye ungwaru Sophia (zvakabatana nemashoko nzvimbo sezvo Palantir uye zvakabatana kuti kukura kadambari simba supercomputers nomukombiyuta chinogumbura cheni Network).
Kana iwe ukatarisa chikwangwani chekambani iyi itsva, unoziva 'Ouroboros', chiratidzo chekare cheyoka kana dhiragoni inodya miswe wayo. Chiratidzo chekutanga chechiratidzo ichi chaive chiri muEgypt yekare, apo inowanikwa muEnigmatic Book ye Netherworld (isingafaniri kuvhiringidzwa neNetherlands), chikamu chechipiri chinyorwa chinobudiswa mubwiro reTutankhamun. Pano inomiririra kutanga nekuguma kwenguva. Asi dhiragoni yenguruve yehutano hweHongshan kubva ku4700-2200 BC. iri kuChina yakakura uye saka inoratidzika muswe-kudya mumitambo yakawanda, yakadai seAztec mythology uye nenyanorgian mythology. IOuroboros inoratidzika seyiyo yakasarudzwa sechiratidzo chemashiripiti nekambani ine zita iro rakafanana nemashiripiti. Mutsa ndedhimoni inobva mumutambo 'League of Legends'. The website leagueoflegends.wikia.com anotsanangura kuti ndiani Kindred ndewe:
Kindred rinoumbwa nevanhu vaviri:
Gwayana ndiro guru, kupindura summoner's anorayira pamwe chete neanoita kutambudzwa kwekutanga.
Wolf ndiyo yechipiri, ichiita se asingatarisirwiShamwari akarayira kuburikidza mano.
Tinoziva chimwe chinhu kubva kuna Elon Musk's 'Summoning the demon' statement. Izvo zvinomiririra zviri kuputika kubva pachigadziko chako uye zvechokwadi tinogona kuzviona sezvose sehose kune 'vanotya-kudzvara' kana kuti kunyadzisa kune avo vanozvidya mwoyo vanotya kuti AI ichavhundutsa vanhu kure. Mukuona kwevakadzi uye vatendi vanobatanidzwa munyaya idzi, zvinorevawo zvachose. Havana kuzviona sekuti 'kubereka', asi sechinhu chekushanduka-shanduka chinongova chikonzero chekushanduka kwedu uye kukonzera kukura kweNeocortex. Kubva paNeocortex iyoyo tave nekugadzira njere yekuvaka makombiyuta uye iye zvino tinokwanisa kuvaka AI uye kana zvakadaro kuitira kuti tigone kuchinja nekukurumidza kuburikidza neAI, tinogona kungobatana nayo (izvo zvisingabviri).
Chisarudzo cheOuroboros pamwe chakadzika kudarika chatinoziva. Muzvinyorwa zvekare ndakatowedzera kukurudzira vaverengi kuti vafunge kana tingave takakwanisa kurarama mumhando yemufananidzo chaiwo. Nzira yakanakisisa yekunzwisisa chirevo ichocho ndechekuchengetedza mafirimu emitambo 'The Matrix' mupfungwa. Kutarisa sechivako epachivande kuti sezvisingakoshi mumaziso edu, asi kuti ari chaizvo kushanda kuti vakakwirira uye vanhu vari pamusoro akaturikidzana (funga kuti Orange pokuita mhosva zvakasuruvara kupfeka kumusoro pakati Knights cheMarita), pane inotaura nezve 'muvakidzi wemhizha'. Mumagariro akavanzika, uyu 'muumbi mukuru' anokudzwa. Tinocherechedza kuti 'muumbi wekugadzira' mu movie trilogy The Matrix seye murume ane ndebvu chena shure kwevose iyo makombiyuta. Iyo nyoka inodya muswe wayo ndiyo kutanga uye kuguma kwemazuva maererano nemhemberero dzeEgipita. Ikoko kune imwe chiratidzo chekutenderera inoreva nguva: Saturn. Kronos ndiye mwari wenguva muzvinyorwa zvechiGiriki. Kronos is Saturn. Munyaya zvinoverengeka ini akatsanangura kuti nemiwo aigona dana Saturn kapoka, kunamatwa epachivande. Saturn anomiririra nguva. Iwe unogona kuti nyoka iri muchiratidzo cheOuroboros inodya zvisikwa zvayo. Ungati kuti tiri kuenda kudya nguva ino divi kuburikidza pave AI uye kusvika divi itsva umo nguva hazvina basa.
Kana tikafungisisa kuti isu tiri muRuciferian kuenzanisa upenyu iyo mweya yedu, sokunge "kwete chaidzo ndivo" mutambo ruzivo umo nguva rinobatanidzwa, tinofanira kukudziridza AI kuti asvike zvokuti "mapurani guru" kwomweya womunhu, mumwe ndeiya yakaita rukoko "zvakadzama" ari mujeri. Iyo yakasarudzwa iyo inowanikwa nguva inoguma uye yakasara umo vanhu vanobatana neAI. Iwe unogona zvakare kutaura kuti mweya mumweya wezvino wejeri iri kugadzirirwa kuva pabasa reAI. Kana chokwadi kuitika yatiri kurarama (uye yatinoti muchadenga) chiri AI simulation, zvingava zvainoitawo pamwe AI (the mumwechete) Saka unogona kuva nechokwadi kuti tiri chikamu "super-AI" unomhanya simulation ichi. Ungati kuti "mumwechete" ndiyo nguva apo mweya womunhu merges pamwe nakisa AI unomhanya simulation ichi; fusion naRusifer. Izvozvo zvingava kubviswa zvachose kubva kwatakabva. Mushure mezvose, isu tatoita sekare takaparadzana kubva kwatakabva.
Kana iwe uchingofunga nezvemubvunzo wekuti AI ichaitei nebasa kana kuti 'Terminator effect' yeAI, zvino zvingave zvakakodzera kutarisa pane ino yezinga rakadzika. Nokuda kweizvi ndinokupomera kuti uverenge zvinyorwa zvinotevera wozoverenga nyaya inotevera. Mamwe mazita angaita seasina chokuita nehurukuro pakutanga, asi kana uchiaverenga iwe uchaona kuti zvishoma ndezvechokwadi:
Munhu we avatar uye mweya wejeri
'Zero Zero Dawn' kubva kuAmsterdam yekutamba kambani Guerrilla Games 1e danho kune chokwadi chakawedzerwa
Monke mbongoro nhatu dzinoita uropi network (brainet) uye anoshandisa simba re robot
Turkey neIrani, kupesana kweuporofita pamusoro peIsrayeri uye nemugwagwa wemugwagwa kuenda kuRussia nyika yehurumende
Pfungwa dzakanyanyisa ndeyokuti paunonyatsoteerera zviri kuitika zvakapoteredza iwe. Kana wakaziva kuti chimwe chinhu chiri kuitika, unobvuma kuti unofanira kuita. Kuti uve nekwanisi kuita, zvisinei, iwe unofanira kutanga watanga kunzwisisa chinangwa chekuda kwekuuya.
Source chinyorwa listings: leagueoflegends.wikia.com
Ma robots e-Facebook anowedzera: AI uye bioterrorism zvinotyisa kuvanhu?
Nyanzvi yeElon Musk yeNeuralink's neural lace ichauya yakananga kubva kuDARPA (sekufanana neInternet uye mafoni)
Tags: ai, D-Wave, chaiye, Featured, Kindred, njere yekufunga, real AI
3 December 2017 pa 14: 50
Usakanganwa Kushner neshamwari dzake neTeel njll mune imwe nzvimbo yaimbova chikwata cheLucent tech. (ouroboros logo) mu NY pa 666 Fifth Avenue.
Chokutanga, vanhu vanopfuura 7 5777 bhiriyoni pagore kuburikidza chaiye chinopiswa chichange zvikuru wakaderedzwa kuitira kuti kudzora zvavo uye Zionist Israeri uye vakatora guta rayo Jerusarema kusvikira pakati wenyika.
Tambo Inogona Kuziva Jerusarema Seguta Guru raIsraeri Vhiki Inotevera
Musi weChishanu mumwe mukuru wehurumende yeUnited States akaudza Reuters kuti Mutungamiri Donald Trump angapa hurukuro Jerusarema inotevera seguta guru raIsraeri.
3 December 2017 pa 14: 52
3 December 2017 pa 15: 01
4 December 2017 pa 00: 52
Israeri Yakavaka Robhoti Yemauto - uye Inofanira Kutyisa Sh * t Kubva Mamuri
Zvisingatauri kuti maererano neyaimbova Munyori weHurumende Colin Powell akabudisa maeamerica, nyika ine zvishoma 200 zvombo zvenyukireya "zvose zvinotarisirwa kuTehran."
Saka sei Israeri ichienda panguva yakadaro?
Sezvinotaurwa neNew York Post:
"Pamusana pekukura kwevaIsraeri nekushaiwa kwenharaunda, mitsetse yose yebhasiki yakaiswa munzvimbo iyi - Siria, Iraq neIran - inogona kusvika kune imwe nyika mukati meyo uye inogadzirisa chinangwa uye inogona kunge iri mungozi. VaIsrael, vashanduri vacho vaitaura, vaida hurongwa hunogona kupfura zvombo zvevengi kune dzimwe nyika dzakapoteredza uye kupa zvakakwana kudzivirira kwechidiki chechiJudha. "
3 December 2017 pa 15: 09
Kuongorora kunonakidza pamusoro peDajjal (Misleader) = anti-chris naAI
3 December 2017 pa 15: 19
Kudzokera kumashoko kubva kuMusk (usrat) vanoshandisa 'mari spell' kukumbira madhimoni:
3 December 2017 pa 15: 33
https://www.nu.nl/economie/4975826/berlijn-keurt-omstreden-israel-transactie-thyssenkrupp-goed.html (NAZI mari)
"Kuchera kwakaitwa munzvimbo yaiva pedyo neJerusarema. Vanochera matongo vakawana atari mbiri dzebwe, pakati pezvimwe zvinhu. Mumwe wavo akanga akashongedzwa nemufananidzo weBULL. "
3 December 2017 pa 15: 47
Icho chiratidzo chikuru uye vanoshanda vose pamwe chete
3 December 2017 pa 18: 48
3 December 2017 pa 21: 51
Mubvunzo chikuru ndiani mari iyi? Ndinofunga musoro wechikara iri US, isu tose kuona mifananidzo (Eks) DARPA mumiririri Rumsfeld uyo chaizvoizvo ari avaida 9 / 11 zvachero akauya kuudza hurumende pamusoro 2 tiririyoni $ vasingagoni kuronda. Kubva ichi unogona kugumisa kuti 9 / 11 munhu multidimensional zvakarongwa kuti ane chete vanhu vashoma pasi pano kuziva ... o mari yakawedzera kuti $ 21.000.000.000.000, - kuverenga purofiti yenyu. Kufembera uyo anopiwa bhiri nokukurumidza ...
3 December 2017 pa 21: 55
3 December 2017 pa 23: 00
Uye izvi zvinongova madhipatimendi maviri:
DOD neHUD Mari Isingabatsiri: Kutsigira Zvinyorwa zve $ 21 Trillion kana Zvisingabvumirwi Kuchinja ($ 65,000 Per Person)
5 December 2017 pa 23: 15
« Sei pasina nyika munyika ino inonyunyuta pamusoro pesimba guru rekushandisa kweBitcoin
Sei Philip Nitschke / Dr. Rufu rwaShitro rwokuzviuraya rune ngozi »
Total Visits: 15.879.794
ongorora op Libya inopa kujekesa kuti ndedzipi nyika muEurope dzichava dzekutanga kutorwa neTurkey